Gukurahundi Genocide – Page 2 – GADADE GUARDIAN
Posted byRESEARCH HUB 6 Oct 2018 25 Apr 2019 Posted inGukurahundi Genocide, Home, Mthwakazi
Posted byRESEARCH HUB 29 Jul 2017 14 Nov 2021 Posted inGukurahundi Genocide, Home, Human Rights, MthwakaziTags:Matabeleland
Drawing Matabeleland battle lines means doing our fallen heroes and heroines (grandparents, mothers, fathers, sisters, brothers, sons, daughters and the unborn babies mercilessly butchered) proud; we shall not to allow the Zimbabwean state dominion over Matabeleland and not watch a repeat of the horrors of the Gukurahundi inhuman acts of undeterred violence.
Posted byRESEARCH HUB 2 Jan 2017 27 Dec 2021 Posted inGukurahundi Genocide, Home, Mthwakazi, Tribalism, Zimbabwe
Zimbabweans have a constitutional right to celebrate the Unity Day every 22nd of December if they so wish, but doing so is insensitive and an unnecessary provocation of the 1980s Matabeleland victims of the State sanctioned Gukurahundi atrocities.
Posted byRESEARCH HUB 26 Dec 2016 4 May 2019 Posted inGukurahundi Genocide, Home
With a high degree of confidence, my verdict on Zimbabwe’s post-independence operational processes is that they have created more suffering, deeper socioeconomic disparities and have claimed more political victims than the Smith regime would ever have dreamed of. The so-called independence is now a pantomime; of sovereign African states, we are certainly in an exclusiveContinue reading “Zimbabwe independence costs”
Posted byRESEARCH HUB 9 Sep 2016 4 May 2019 Posted inDemocracy, Gukurahundi Genocide, Home, Zimbabwe